ONYE ỌKWỌ ỤGBỌALA NYOCHA SERIAL BUS UNIVERSAL - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Gbanwee nsogbu na onye na-ejide ụgbọ eriri ụgbọelu zuru ụwa ọnụ
N'agbanyeghị mmepe ngwa ngwa nke netwọk mmekọrịta, ọtụtụ n'ime ibe, nke nwere ike iyi ka ọ dị mfe iji ndị ọrụ, emebeghị emejuputa, ọtụtụ ndị adịghịdị ezube ka e tinye ha n'ọrụ. Ndị mmepe nke atọ, ndị na-ewepụta ngwaahịa ha dịka nkwụsị maka nchọgharị ndị na-ewu ewu, na-agbakwụnye atụmatụ ndị ọzọ. A ga-atụle isiokwu a dị ka mgbakwunye na Yandex Browser.
VKLife - ọ bụ ọbụna karịa mgbakwunye dị mfe. Nke a bụ ihe omume zuru ezu nke na-enyere ndị ọrụ VKontakte aka ịgbasa ọrụ nke netwọk mmekọrịta site na ịmepụta bọtịnụ ọrụ ndị kachasị ewu ewu n'ime ogwe osisi a na-ahụ anya.
Budata VKLife kachasị ọhụrụ
N'ụzọ dị mwute, ntinye a dị maka Yandex.Browser, a na-eme ya iji kwalite ya, n'ihi ya, ọnụnọ ya na kọmputa dị mkpa. Otú ọ dị, site na ntinye ọzọ, i nwere ike ịgụ na tinyekwara na Chrome na ihe nchọgharị ndị ọzọ dabere na engine Chromium.
1. Ihe mbụ ị chọrọ bụ nbudata tinye-na. A na-ebudata ya site na saịtị gọọmenti dị ka faịlụ isi, mgbe ahụ, a na-ebugharị ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ.
2. Mgbe ebugo faịlụ ahụ, ọ ghaghị ịkwalite site na ịpịpị bọtịnụ aka ekpe. Echichi bụ ọkọlọtọ, ọ dị iche na mmemme ndị ọzọ. Kpachara anya, installer na-enye ibudata ngwanrọ ndị ọzọ, plug-ins na toolbars, nke ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ọ gaghị adị mkpa. N'oge a, ọ bara uru icheta na agbadoro Yandex Browser maka mgbatị ahụ na-arụ ọrụ, n'ihi ya, ị nwere ike ịhapụ akọrọ naanị n'ihu ya (ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ enwebeghị ihe nchọgharị a na usoro).
3. Mgbe echichi, usoro a ga - amalite Yandex.Browser, mgbe ahụ na peeji nke ga - emepe, ịkwesịrị ịgbaso ntụziaka nwụnye kachasị - budata ma mee ka tinye-na ma jikọọ peeji VK gị. Ihe dị mma ịbanye na nbanye na paswọọdụ site na akaụntụ mmadụ bụ ịbanye na saịtị ahụ site na ogwe aka ndenye, ọ bụghị site n'usoro ihe omume ahụ. Nke a na - eme ka nchekwa nke data data na - abawanye ma wepụ ha ohi.
4. Ozugbo ihe atụ a dị njikere ịga. Ọ na-adị ka ogwe osisi dị na nri na ihe nchọgharị ahụ, nke nwere ihe niile bụ isi ọrụ. A ga-akọwa ihe mgbakwunye ohere ndị a n'okpuru:
- ikike iji jikọọ ọtụtụ akụkọ - wepụ mkpa ọ dị itinye aha njirimara na paswọọdụ gị oge ọ bụla. Ị nwere ike ịgbanwe naanị n'etiti ọtụtụ ndekọ. Enwekwara bọtịnụ iji wepụ otu akaụntụ.
Isi ọrụ nke tinye-na-bụ ọrụ nke stealth mode. Mgbe ịpị bọtịnụ ahụ Nke na-anọghị Igodo nke VKontakte ga-emechi, na n'ọnọdụ ya, onye ahịa dị iche iche ga-arụ ọrụ, nke ị nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ. Mgbe minit 15 gasịrị, onye ọrụ ahụ ga-adị anya, n'ime usoro ihe omume ị nwere ike ịnọgide na-anọdụ ala na saịtị ahụ, na-ege egwu, na-agụ akụkọ ma na-akparịta ụka na ndị enyi.
Iji jiri usoro a, ị ga-achọ ịbanye ọzọ. Maka ndị ọrụ na-agaghị enwe mmasị ọzọ na akụkọ sitere n'aka onye mmepụta, a na-atụ aro ka ị wepụ igbe ego atọ ahụ n'ọnụ ụzọ.
- Onye na-egwu ihe dị egwu na-enye ohere ma nchịkọta ọnụ ọgụgụ nke ihe ndekọ ya ma na-enye gị ohere ige ntị na listi egwu ọkpụkpọ. Na nke a modul, mgbe emegharịrị, nzaghachi ma kwụsịtụ bọtịnụ nchịkwa, na-agbanwegharị egwu n'abụ na azụ, idozi olu site na ihe nchọgharị ahụ na ogwe ihu ọganihu nke egwu ahụ. N'elu ihe ọkpụkpọ egwu bụ ndepụta nke albums, n'etiti nke ị nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa.
- Ijikwa taabụ na ịmepụta nchekwa akwụkwọ edeturu dịkwa na ndọtị a. Nhọrọ dị mma maka ndepụta ndepụta nke taabụ na ibe edokọbara, ugbu a, ihe abụọ ndị a dị na menu ndọpụta mgbe ịpị otu bọtịnụ.
- nlebara anya nyocha nke nkwurịta okwu na nkwurịta okwu na windo dị obere. Naanị pịa na envelopu ahụ, họrọ enyi - na na mmalite window gosipụtara iji kwurịta ya. Oge kwesiri - elele nleta ikpeazụ nke onye ọrụ nke netwọk mmekọrịta.
- search yandex nke oma, nke gosiputara nchoputa ya na ngwuputa mepere
Bọtị mgbakwunye arụmọrụ zuru ezu dị na sidebar, nke, n'aka nke ya, apụtaghị naanị na saịtị nke netwọk mmekọrịta mmadụ na-ewu ewu, ma na nke ọ bụla ọzọ. Ya mere, ịnweta ohere ndị dị n'elu ga-esi n'ebe niile. Nke obere ihe - interface, ọ dị mwute na ọ bụghị mgbe nile ka a kwụchara. Enwere otutu ihe ederede ederede, imeputa ihe di iche iche na ntakiri ihe eji eme ihe. Na nke ọzọ - mgbakwunye na-adabara ndị ọrụ na-etinye oge dị ukwuu na VK ma chọọ ịbawanye ọrụ ya.